Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Notsapaina sy notsapaina: Camp Boot any Seychelles manaitra
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Vaovao isan-karazany
Camp Seychelles Boot
Vondron'ireo mpankafy fanatanjahan-tena avy any Rosia no nahita ny traikefa nahafinaritra tany amin'ny tany tropikaly Seychelles farany teo.
Ny tobin'ny Slim Fit Club dia raharaha "avo lenta" ary toerana mahafinaritra no voafidy hihaika ireo mpandray anjara.
Ny tanjon'ny tobin'ny boot dia ny hanery ny fetran'ny tsirairay.
Nandritra ny folo andro nitoerany tao amin'ilay nosy, ireo mpitsidika avy any Russia dia nandray anjara tamin'ny hetsika mampientanentana toy ny zip-lining sy ny fiakarana vato ao amin'ny Constance Ephelia Resort.
Toeram-pisotroana botika mihaja - Zava-misy izany!
Hetsika fanao isan-taona, ny tobin'ny Slim Fit Club dia raharaha "avo lenta" ary toerana mahafinaritra no nofidina hanohitra ny mpandray anjara.
Ny toerana voafantina dia tsy maintsy afaka manolotra fotoana sahaza ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena sy fitsangatsanganana, ny fahitana ny kolontsaina sy ny tantara eo an-toerana, ary ny toerana mety hihaikana ny fahasalamana ara-batana an'ireo mpandray anjara. Seychelles dia voafantina tsy noho ny hatsaran-tarehiny voajanahary fa ny tena zava-dehibe dia ny exclusivity.
Raha nomena ny fitsaboana lafo vidy avy tany amin'ny toeram-pitsangatsanganana, dia nanolotra kaontera roa ho an'ny mpandray anjara ny mpitatitra rosiana Aeroflot rehefa avy nandao ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo ary koa ny tambin-karama fanampiny sy entana, fanomezana marobe ary internet fatratra eto an-tsambo.
Nandritra ny toerana nitadiavana dia nitady ny serivisy ho an'ny mpiara-miasa eo an-toerana, ao anatin'izany ny 7º South sy Creole Travel Services, izay nanolotra ny tolotra sy ny fiaraha-miasa tsara indrindra mba hahazoana antoka fa hisy fahombiazana.
Fikarohana fetra ara-batana
Ny tanjon'ny tobin'ny boot dia ny hanery ny fetran'ny olona iray, iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra amin'ny kalandrie an'ny vehivavy Slim Fit Club dia ny fitsangantsanganana mankany an-tampon'ny Morne Blanc sy Dans Gallas, hetsika roa izay nisedra ny haavon'ny fahasalamany raha nankafy lalana roa mahavariana ao amin'ny nosy Mahé lehibe. Voahodidin'ny natiora, i Polina Kitsenko sy ny ekipan'ny Slim Fit dia niady tamin'ny havoana mideza sy ny hamandoana avo, ka nahatonga azy ho any an-tampon'ny olana kely dia kely, valisoa avy amin'ny fahitana rivotra niainana tamin'ny faran'ny dia.
Nandritra ny folo andro nitoerany tao amin'ilay nosy, ireo mpitsidika avy any Rosia dia nandray anjara tamin'ny hetsika mampientanentana toy ny zip-lining sy ny fiakarana vato ao amin'ny Constance Ephelia Resort any amin'ny morontsiraka avaratr'i Mahé.
Tamin'ny andro tsy nizoran'izy ireo ivelan'ny trano fandraisam-bahiny, tsy nampihoatra ny fandaharana ny fandaharana, ny mpandray anjara kosa dia be atao tamin'ny hetsika tsirairay sy vondrona maromaro. Anisan'izany ny fotoam-panofanana fanatanjahan-tena intelo isan'andro.
Fomba fanaingoana kreôla
Tsy niasa ho an'ny dokambarotra Slim Fit Club izay nanao ny ankamaroan'ny fitsangatsanganana an-dranomasina catamaran miavaka tao amin'ny Sainte Anne Marine Park izay nahitana ny fitsidihana sy fitetezana ny Nosy Moyenne, valan-javaboary kely indrindra eran-tany nolovaina tamin'ny mponina ao Seychelles avy amin'i Robinson Crusoe, mpanao gazety taloha sy ankehitriny, Brendon Grimshaw, ary barbeque nentim-paharazana kreôla eo amoron-dranomasina.
Natao tao amin'ny iray amin'ireo trano onenan'i Four Seasons Resort Seychelles (anarana feno hotely sy toerana misy azy), ny zazavavy dia notsaboina tamin'ny fety kreôla iray teo ambanin'ny lohahevitra 'Moonlight in Paradise' mba hanodinana toby fitobiana tena mahomby. Piraty mitovy dika amin'ny ny Seychelles, ity ampahany saro-pady teo amin'ny tantaran'ny nosy ity dia nankalazaina tamin'ny alàlan'ny kilasy mixology niarahana niasa tamin'ny mpamokatra zava-pisotro misy alikaola Takamaka Rum eo ambanin'ny lohahevitra 'In Search of Treasures'.
Media sosialy sy maro hafa
Mamorona atiny tsara tarehy sy avo lenta, manasongadina ny fahasamihafan'ny toerana halehany, ny natiora, ny zavamaniry sy ny biby, ny morontsiraka, ny hetsika atolotra ary maro hafa, Ramatoa Kitsenko, mpiorina mafana fo malaza sy malaza, no nanasongadinan'ny matihanina ny zava-mitranga isan'andro ho an'ny plethora an'ny mpanjifa avo lenta manerana an'i Russia amin'ny sehatra media sosialy.
Ireo mpandray anjara hafa koa dia nandefa sy nizara ny tantaran'ny zava-bitany avy tany Seychelles, nampiseho ireo nosy amin'ny nosin'ny Ranomasimbe Indianina ho toerana maitso sy mahafinaritra.